Yakachipa Yakasarudzika Rubber Bhandi Conveyor Machine Vatengi uye Fekitori | YiZheng
Iyo Rubha Bhandi Conveyor Machine inogona kushandiswa kutakura zvese hombe zvinhu uye zvigadzirwa zvakapedzwa. Iyo inogona zvakare kushandisirwa neakasiyana maindasitiri ekugadzira masisitimu, uye inogadzira mutinhimira wekugadzira mutsetse.
Chii chinonzi Rubber Belt Conveyor Machine inoshandiswa?
Iyo Rubha Bhandi Conveyor Machine inoshandiswa kurongedza, kurodha uye kuburutsa zvinhu mu wharf uye imba yekuchengetera. Iyo ine zvakanakira komputa dhizaini, yakapusa mashandiro, nyore kufamba, chitarisiko chakanaka.
Rubha Bhandi Conveyor Machine yakakodzerawo kugadzirwa kwe fetiraiza uye kutakura. Iwo muchina-unofambiswa muchina uyo unotakura zvinhu uchienderera. Inonyanya kuve ne rack, conveyor bhandi, roller, tension kifaa uye kifaa chekufambisa.
Shanda Chinyorwa cheRubber Belt Conveyor Machine
Maitiro ekuchinjisa zvinhu anoumbwa pakati pekutanga feed poindi uye yekupedzisira kuburitsa poindi pane imwe irikupa mutsara. Izvo hazvigone chete kuitisa kutakurwa kwezvinhu zvakapararira, asi zvakare kuita kutakurwa kweakapedza zvinhu. Kuwedzera kune yakapusa zvinhu zvekufambisa, inogona zvakare kushandira pamwe nezvinodiwa zveyekuita maitiro emabhizimusi akasiyana mabhizinesi kuti aite mutinhimira kuyerera oparesheni yekufambisa mutsara.
Zvimiro zveRubber Belt Conveyor Machine
1. Yepamberi uye yakapusa muchimiro, iri nyore kuchengetedza.
2. Yakakwira yekuchinjisa kugona uye kureba kuchinjisa daro.
3. Inoshandiswa zvakanyanya mumigodhi, metallurgical uye marasha indasitiri kuendesa jecha kana bundu zvinhu, kana zvakapetwa zvinhu.
4. Icho chinhu chakakosha kwazvo pamashini asingamire mune yakasarudzika mamiriro.
5. Inogona kuve yakagadzirirwa.
Rubha Bhandi Yekutakura Machine Machine Ratidza
Rubha Bhandi Yekutakura Machine Machine Sarudzo
Bhandi Upamhi （mm)
Bhandi Kureba （m) / Simba （kw)
Nhanho （m / s)
Unyanzvi （t / h)
/12 / 1.5
/10 / 5.5
Pashure: Linear Vibrating Screener
Zvadaro: Inotakurika Nhare Bhendi Conveyor
Nhanganyaya Chii chinonzi Disc / Pan Organic & Compound Fertilizer Granulator? Iyi nhevedzano yegranulating disc yakashongedzerwa nemiromo mitatu inodonhedza muromo, inofambisa kuenderera kwekugadzira, inoderedza zvakanyanya kusimba kwevashandi uye kugadzirisa basa. Iyo yekudzora uye mota kushandisa inoshanduka bhandi dhiraivha kutanga zvakanaka, kudzora kukanganisa kwe ...
Nhanganyaya Chii chinonzi Forklift Type Composting Equipment? Forklift Type Komposting Midziyo ina-mu-imwe yakawanda-inoshanda yekutendeuka muchina iyo inounganidza kutendeuka, kutapurirana, kupwanya uye kusanganisa. Inogona kushandiswa mumhepo yakashama uye mumusangano zvakare. ...
Nhanganyaya Chii chinonzi Double Shaft Fertilizer Mixer Machine? Double Shaft Fertilizer Mixer Machine inyanzvi yekuvhenganisa michina, iyo yakareba tangi hombe, zvirinani kusanganisa maitiro. Huru mbishi zvinhu uye zvimwe zvekubatsira zvinhu zvinodyiswa mumidziyo panguva imwe chete uye zvakasanganiswa zvakafanana, zvobva zvatakurwa ne ...